PCT & Cycle Tsigiro
Muviri Wakavakwa Labs Testo Boost 90 Makapu
26 Reviews Kubva paongororo dze 26
Iyi inotevera kuunganidza ndizvo zvatinoisa paSARMs Chitoro UK seyakanakisa kutenderera rutsigiro rweSARMs. Dzidza zvakawanda nezve nei rutsigiro rutsigiro rwakakosha uye zvigadzirwa zvakanakisa zvemashure-kutenderera kurapwa.
Chii chinonzi rutsigiro rutsigiro?
Cycle rutsigiro zvakare runodanwa sekutsigirwa kwechiropa, ndizvo zvigadzirwa zvinotorwa panguva yeSARMs kutenderera kana prohormone kutenderera. Izvi zvigadzirwa zvinoitirwa kuchengetedza muviri nenhengo kubva kune zvinokuvadza mhedzisiro uye nekuvandudza zviwanikwa zvakaitwa panguva yekutenderera kweSARM.
Nei post-kutenderera kurapa kuchikosha?
Post-kutenderera kurapa (PCT) inobatsira muviri kupora mushure mekutenderera kwesimba rekuita. Izvi zvigadzirwa zvinowanzo dzvinyirira mahormone apo vashandisi vari kuatora, ayo anogona kutora mutero pane yemuviri maitiro testosterone kugadzirwa maitiro.
Mushure maSARM kana prohormones kutenderera, zvakakosha kuti vashandisi vazadze iwo ma testosterone emuviri. Pasina iyo, kupora kunononoka uye vashandisi vanogona kunzwa kuneta kwakanyanya uye mune dzimwe nguva kushushikana. Kutora maPCTs kwakakosha mukuchengetedza hupenyu hwese mushure mekunge muviri wave kuburikidza neyekusimudzira kutenderera. Pasina iyo, muviri unotora nguva yakareba kuti uwanezve.
Isu tinokurudzira zvinotevera zvigadzirwa zve post-kutenderera kurapwa (PCT) uye kutenderera rutsigiro.
Muviri wakavakirwa Labs SARMs kutenderera rutsigiro
Ichi chigadzirwa chinofanirwa kutorwa pamwe chete nemaSARM kutenderera. Inodzivirira nhengo nemuviri kuti vashandisi vawane iwo mabhenefiti akakwirira kubva kumaSARM avo kutenderera. Ichi chigadzirwa chinowedzera rutsigiro uye mhedzisiro kuitira kuti muviri uwane zvese zvaunoda panguva yemaSARM uye kudzidziswa kwakanyanya. Iyi rutsigiro rutsigiro ine
Mbeu yeMrape Extract
Tribulus Terrestris wabvisa
Celery Mbeu Bvisa
Vashandisi vanofanirwa kutora matatu macapuleti kamwe zuva nezuva pamwe nemamwe maSARM avanotora.
Muviri Wakavakwa MaRabhadhi SARM PCT
Iyi maSARM kutenderera PCT inogadzirwa kubva kune zvese-zvakasikwa zvinoshandiswa kubatsira kudzivirira muviri wako kubva kuesrogenic mhedzisiro uye kukubatsira iwe kuchengetedza zviwanikwa kubva kuSARMs kutenderera. Heano akakosha zvigadzirwa mune ino PCT:
Ashwagandha Bvisa - iyo adaptogenic miriwo inoshandiswa kwemazana emakore kusimudzira immune immune uye kugadzirisa kwakazara simba
Tribulus Terrestris wabvisa - mushonga unorapa unozivikanwa nekugona kwawo kudzikisa cholesterol neshuga yeropa
Rhodiola Rosea wabvisa - Inowedzera kushomeka kwemuviri kunetseka
Iyi PCT inofanirwa kutorwa katatu zuva nezuva muyero yematapuleti matatu mushure mekudya kwese.
Muviri Wakavakwa MaLab Testo Boost
Ichi chigadzirwa chakagadzirirwa chaizvo kubatsira kusimudzira mazinga e testosterone mumuviri uye kusimudzira hutano hwese uye kuvimba. Izvo zvakare zvinobatsira kuwedzera simba uye kutsungirira nhanho. Heano akakosha zvigadzirwa.
Tongkat Ali - mishonga yemishonga inozivikanwa yekurapa yakaderera libido uye testosterone mazinga
Kubaya Nettle - Inobatsira kurapa arthritis uye kusimudza ropa antioxidant mazinga
Zvinokurudzirwa kuti vashandisi vatore matatu macapsule kamwe kamwe zuva nezuva pamwe nekudya.
Animal Pak inonyanya kufarirwa nemaSARM uye vashandisi-vanoita-vanowedzera vashandisi. Iine zvinopfuura makumi matanhatu zvakakosha zvinoshandiswa zvinodzivirira kuumbwa kwemipengo yezvinovaka muviri. Inobatsira kupa nyama mhasuru nekuendesa zvigadzirwa senge zvakakosha amino acids, carbs, uye mamwe mavitamini uye mamineral.
Animal Pak yakamira muyedzo wenguva nekuti inoshanda uye nekuti inobatsira vashandisi simba kuburikidza neakasimba materu.